Mihamanakaiky ny fanovàna ny lalànany momba ny fitoviana ny ao Trinidad & Tobago, tafiditra amin’izany ny fironana ara-pananahana · Global Voices teny Malagasy
Voafetran'ny asa azony atao ilay lalàna misy amin'izao fotoana izao
Voadika ny 29 Mey 2021 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, русский, Español, Português, English
Saina miloko avana marevaka. Sary an'i Marco Verch,mpakasary matihaninana tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Tsirairay, nanitsy tsikelikely ny boky mirakitra ny lalànany ireo firenena ao Karaiba mba hahatsinjovana fitoviana lehibe kokoa ho an'ireo olona LGBTQ+, amin'ny tsy fametrahana ho heloka ireo ampahany miresaka sôdômia tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany. Tamin'ny 2016, i Belize. Taona roa taty aoriana, Trinidad & Tobago no nanaraka ny diany, saingy nihisatra vao tonga ny fiantraikan'ilay fandravàna ireo andinin-dalàna mifandraika amin'izany. Taona telo taorian'ny namoahan'ny fitsaràna fa tsy araka ny lalàm-panorenana ireo lalàna momba ny sôdômia ao amin'ny firenena, toa vonona ihany hanova ny lalàny mifandraika amin'ny fironana ara-pananahana ny Equal Opportunity Act (EOA) ao Trinidad & Tobago (Lalàna momba ny Fitoviana).
Ny tanjona ambaran'ilay Lalàna dia ny “handràra ireo karazana fanavakavahana sasantsasany” ary “hampiroborobo ny fitovian'ny vintana ho an'ny olona rehetra samihafa sata”. Hahatongavana amin'izany, noforonina ny Komitin'ny fitoviana sy ny Tribonalin'ny fitoviana mba handray an-tànana ny olana tahàka izany, saingy hatreto, tsy misy na iray aza amin'ireo rantsana ireo afaka miatrika ireo olan'ny fanavakavahana mitofotra amin'ny fironana ara-pananahana. Ny olana momba ny taovam-pananahana, ny foko niaviana, ny fivavahana, ny sata ara-panambadiana, na ny fahasembanana eo amin'ny resaka asa, fiofanana, fanabeazana, sns…. no hany voarakotr'ireo lalàna misy amin'izao fotoana izao.
Taorian'ny 14 Aprily nanambaran‘ny Scotiabank ao Trinidad & Tobago fa ho hitariny ny fiahiana ara-pahasalamàna ataony mba hankany amin'ny vadin'ireo mpiasa mifanambady amin'ny mitovy aminy (lahy samy lahy, vavy samy vavy), toy ny fomba efa nataony ihany tamin'ny vadin'ireo mpiasa mifanambady vavy sy lahy, dia nitombo ny tsindry ho fanovàna ny lalàna amin'izao fotoana.
Niteraka adihevitra nanerana ny firenena ilay fanambaràna, ary niarahaba izany ny Tranoben'ny Varotra Amerikàna (AMCHAM) sy Ian Roach, lehiben'ny Komitin'ny Fitoviana, izay samy nanamarika tao anaty antsafa iray ho an'ny “Trinidad and Tobago Newsday“:
Nilaza ny Lehiben'ny Fampanoavana, Faris Al-Rawi, fa nandrisika azy ny fandraisana andraikitra fampiatiana nataon'ny Scotiabank ary manokatra varavarana izy ho an'izay rehetra ilaina hanoherana ny “dindon'ny fanavakavahana” misy. Ny fijoroan'i Al-Rawi dia somary samihafa amin'ny heviny taorian'ny didin'ny Fitsaràna Avo tamin'ny 2018; tsy ela akory taorian'ny nanambaràna ilay didy ho “tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana”, nilaza ny fikasàny hampakatra ny raharaha ny fanjakàna.
Raha tsy azo lavina fa nahavita dingana goavana i Trinidad & Tobago tamin'ny resaka fanavakavahana ireo mpikambana anatin'ny vondrompiarahamonina LGBTQ+ ao an-toerana, mbola misy hatrany ny fankahalàna pelaka—ny ankabeazany dia natosiky ny antony ara-pivavahana. Tany anatin'ireo tambajotra media sôsialy toy ny Facebook, fanakianana maro no nitsena ireo fanehoankevitry ny vahoaka momba ilay fanambaràn'ny Scotiabank.
Mandritra izany fotoana izany, tsy hoe fotsiny mitohy miatrika fanavakavahana ireo olona LGBTQ+, fa ireo fihetsika miharo herisetra, izay ny ankamaroany dia miafara amin'ny fahafatesana. Ny akaiky indrindra, ny namonoana an'i Marcus Anthony Singh, mpikambana iray avy amin'ny vondrompiarahamonina LGBTQ+ ao an-toerana, niteraka adihevitra tety anaty tambajotra momba ny tena zavamisy atrehan'ny maro amin'ireo olona LGBTQ+ manoloana ny resaka fiarovana / fitoniana sy fanavakavahana. Maro amin'ireny fifanakalozan-kevitra ireny no nitranga tao amin'ny Twitter Spaces, izay sehatra natao hifampiresahana amin'ny feo mivantana monja ihany mba hisian'ny fifampiresahana sy fifanabeazana azo antoka / am-pitoniana.